किन एकता कार्यक्रमबाटै बाहिरिए माधवकुमार नेपाल ? - USNEPALNEWS.COM
किन एकता कार्यक्रमबाटै बाहिरिए माधवकुमार नेपाल ?
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: April 22, 2019
जिल्ला तहको एकता घोषणामा सहभागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कार्यक्रम नसकिदै बाहिरिएपछि निकै चर्चा भइरहेको छ । कतिपयले जिल्ला तहको नेतृत्वमा गरिएको बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टी भएको आशंका गरेका छन् ।
तर नेपालले कार्यक्रममा आफूले सम्बोधन गर्न नपाएपछि असन्तुष्ट भएर कार्यक्रमको बिचमै निस्किएको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मात्रै सम्बोधन गर्न दिएकोमा असन्तुष्ट बनेका नेपाल कार्यक्रममा पुरै समय नबसेका हुन् ।
नेपालले पार्टीभित्रै आफूलाई अपहेलना गरिएको महसुश गरेर सांकेतिक विरोध गरेका हुन् । अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग यस विषयमा कुरा गर्दा आफूसमेत छक्क परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जिल्ला तहको एकता सहमतिमै गरिएको भए पनि कार्यक्रममा उचित महत्व नदिएपछि नेपालको अर्को असन्तुष्टी पोखिएको छ ।
भारतिय राष्ट्रपति मुखर्जी तिन घण्टाका लागी आज पोखरा आउँदै ,भब्य स्वागत गरिदै
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 November 4, 2016
तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजयी
यूस नेपाल न्युज	 July 4, 2017
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 July 28, 2020